Nin xaaskiisa dilay oo lagu wareejinayo ciidanka booliska ee maamulka Hirshabeele – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin xaaskiisa dilay oo lagu wareejinayo ciidanka booliska ee maamulka Hirshabeele
Wararka naga soo gaaraya tuulada Tugaarey oo qiyaastii 20-km u jirta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in habeenkii xalay uu halkaasi ka dhacay dil naxdin leh, kadib markii haweeney uur laheyd uu dilay nin iyada qabay.
Ninka dilka u geystay haweeneydaasi uurka laheyd oo lagu magacaabo C/laahi Isaaq ayaa la sheegayaa in qori uu xilligaasi watay ay xabad kaga fakatay xaaskiisa, kadibne ay isla goobta ku geeriyootay.
Qaar ka mid ah ehelada ninkaasi dilka geystay ayaa warbaahinta u sheegay in ninkaasi ay haatan gacanta ku haayaan, islamarkaana ay ku wareejin doonaan maamulka magaalada Jowhar.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeele ayaa la sheegayaa inay goordhaw gaareen goobta uu dilka ka dhacay, waxaana saacadaha soo socdo lagu wadaa in ciidankaasi lagu wareejiyo ninka dilka u geystay xaaskiisa ee uurka u laheyd.
Dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in ninka dilka geystay oo Beeraley ah uu xilligaasi ka yimid beertiisa, kadibne uu xaaskiisa ka dalbaday inay biyo u keento, balse markii ay biyaha kasoo daahisay uu dilay.